နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်း, solar လမ်းအလင်းဝင်ရိုးစွန်း, တရုတ်အတွက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူ
Home > ထုတ်ကုန်များ > လမ်းမီးစီးရီး > နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်း ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်း , နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းဝင်ရိုးစွန်း ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းဘက်ထရီ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ဆိုလာပြားတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်ပါးလွှာသောနေရောင်ခြည်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်ခြားနားချက်အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော lgiht တွင် CIGS ဆိုလာပြားများဟုခေါ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဆိုလာပြားများရှိသည်။ IGS...
လမ်းနှင့်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လီသီယမ် - ဘက်ထရီလမ်းမီးခွက်များဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းရောင်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာ၏ lithium...
တရုတ်နိုင်ငံ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုစွမ်းအင်၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ဦး စားပေးသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုအရန်အကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးခြင်း။...
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို 1) ဆီမီးခွက် post ကိုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းများ၏ပစ္စည်း: 6063-T5 က The ပြင်မျက်နှာပြင်ကိုသဘာဝအရောင်အားဖြင့်ဓါတ်တိုးနေသည်။ 2) Converter အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ parameters: ကိုမရရှိနိုင် မြေတပြင်လုံးဆီမီး 3) အလင်းအား...
လျှောက်လွှာများ scope ထိုကဲ့သို့သောအတွက်စက်ရုံများ, ဆေးရုံများ, လမ်း, ရပ်ကွက်ကော်မတီများ, အလင်းရောင်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ, ကုန်သည်တွေ, စည်ပင်သာယာလမ်းအင်ဂျင်နီယာ, လမ်းအလင်းရောင်, ပြင်ပအလင်းရောင်အဖြစ်လမ်းများ, လမ်းများ, ပန်းခြံများ, ရပ်ရွာ, စက်ရုံတွေ,...
photovoltaic နေရောင်ခြည်ဆဲလ်ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်နေရောင်ခြည်ဆဲလ်များနှင့် amorphous ဆီလီကွန်နေရောင်ခြည်ဆဲလ်တွေခွဲခြားထားပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ photovoltaic စက်မှုလုပ်ငန်းများလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူ, amorphous...
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆီမီးခွက် seies အလင်းရောင်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရိုးရာအလင်းရောင်အစားထိုးနေရောင်ခြည်အလင်းရောင်အင်ဂျင်နီယာအစိတ်အပိုင်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုပြင်ပမပါဘဲလမ်း, ဥယျာဉ်, ပန်းခြံ, ကျောင်း, ကုန်းနှင့်လယ်ပြင် etc..Applicable...
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုများ, ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ, စင်ကြယ်သော pollutionfree နှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, ဆုံးသောစင်ကြယ်သောအမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးအသုံးပြုခြင်း,...
တရုတ်နိုင်ငံ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်း ပေးသွင်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းတစ်ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီပါဝါထောက်ပံ့ရေး, အဆို့ရှင်ထိန်းချုပ်မှုတံဆိပ်ခတ်အမျိုးအစားနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ဘက်ထရီဂျယ်ဘက်ထရီ) လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်ရန်, စူပါတောက်ပအလင်းအရင်းအမြစ်, မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်အဖြစ် LED နှင့်အသိဉာဏ်အားသွင်းခြင်းနှင့်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည် Controller ကိုထိန်းချုပ်ထားဖြစ်ပါသည် မှအစားရိုးရာအများပြည်သူပါဝါအလင်းရောင်မီးခွက်၏အသုံးပြုသည်။
1. ဝါယာကြိုးများနှင့်ကတုတ်ကျင်း, စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှကတည်းကတပ်ဆင်ရန်လျှပ်စစ် energy.Easy ဖို့အလင်းစွမ်းအင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ microcomputer ဉာဏ် Controller ကိုအသုံးပြုခြင်း။
2. အဆိုပါ microcomputer ဉာဏ် Controller ကိုအဆင့်မြင့်အထူး-ရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းစည်း circuit ကိုမြင့်မားပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှု, ဝန်-ထပ်ခါထပ်ခါ-ဥတုတားဆီး, Output တိုတောင်း circuit ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, လုံခြုံဘက်မှာ, အလုပ်သက်တမ်း, အဆင်ပြေပါသည်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
3. အမြင့်ထိရောက်သောက Non-ထိန်းသိမ်းခြင်းစုဆောင်းခြင်းဆဲလ်အားသိမ်းဆည်းခြင်း, တာရှည်ခံပါသည်။
4. အလိုအလျောက်လမ်းကြောင်းအမျိုးအစားအချိန် Controller, အလိုအလျောက်အမျိုးမျိုးသော seasons.For အတွက်ကွဲပြားခြားနားသော illumination အချိန်နက်ရှိုင်းသော-ညမှာအလိုအလျှောက်ပိတ်-ပိတ်အလင်းနှင့်အတူအလုပ်အချိန်စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးဉာဏ် controller ကိုသက်တမ်းတိုးရေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အချိန်ညှိ။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းဝင်ရိုးစွန်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းဘက်ထရီ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းကောင်းကျိုးများ